Natiijooyinka Doorashada oo aan rasmi ahayn ka dib markii Dadka Zambia ay codeeyeen
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Natiijooyinka Doorashada oo aan rasmi ahayn ka dib markii Dadka Zambia ay codeeyeen
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan • Zambia War Deg Deg Ah
Zambia ayaa codeysay: Sida ku cad natiijooyin aan la xaqiijin Mr Hichilema ayaa hadda ku jira booska codbixinta isagoo helay 64.9% codadka, waxaa ku xigay Madaxweyne Edgar Lungu oo helay 33.1%. Waxaa ku daba jira murashaxa Dimuqraadiga Harry Kalaba (0.4%) iyo Fred M'membe oo ka tirsan Xisbiga Hantiwadaagga (0.3%).
Madaxweynaha hadda ee Zambia Edgar Lungu ayaa doonaya in mar labaad la doorto.
Ninka ka soo horjeeda waa Hakainde Hichilema, oo ah maamule ganacsi oo caan ka ah Zambia.
Aaladaha isgaarsiinta, sida SKYPE ama WhatsApp, Facebook ama Twitter ayaa weli ku xiran qaybo ka mid ah Zambia waqtigan, hase yeeshee gobollada qaarkood ayaa u muuqda inay mar kale internetka ku jiraan sida eTurboNews tirakoobka taraafikada intarneedka.
Tirooyinkii ugu horreeyey ee aan rasmi ahayn ayaa ka imanaya gobollo kala duwan, hase yeeshee codadka natiijooyin caddaalad iyo caddaalad -darro ah ayaa lagu dhegeystaa baraha bulshada ee Zambia.
Tirinta codadka ugu dambeeya ayaa hadda ka socota goobaha kala duwan ee codbixinta ee dalka oo dhan. "Si naxariis leh u hubi ilahaaga markaad wadaagayso macluumaadka doorashada ku saabsan doorashooyinka 2021 si looga fogaado faafinta warar been abuur ah oo marin habaabin ah." waa qoraal ay soo saareen Kooxda Dabagalka Kaniisadaha Masiixiyiinta.
Doorashooyinka Afrika waxaa lagu go'aamiyaa meelaha Miyiga ah waxaana lagu tartamaa Magaalooyinka. Tani waa faallooyinka Dr. Walter Mzembi, wasiirkii hore ee Dalxiiska ee Zimbabwe iyo xubin sare oo ka tirsan Guddiga Dalxiiska Afrika. Wuxuu ugu yeeraa erayadiisa: Mzembi caqli gal doorasho!
Xalay ayuu bartiisa twitterka ku soo qoray: “Ku sugitaanka natiijooyinka Zambia - heesaha“ Waxaan Doonaynaa Isbeddel! ” - ma si sax ah ayaan wax u maqlayaa? Mise waa dhegahaygii suufka ahaa? Waa wax aan caadi ahayn runtii!
Inta badan tirooyinka aan rasmiga ahayn ayaa saadaalinaya isbadal dawladeed oo ka dhaca Zambia wakhtigan.
Madaxweynaha Zambia waxaa lagu doortaa nidaamka laba wareeg ah. 167-ka xubnood ee Golaha Shacbiga, 156 ayaa lagu doortay nidaamkii ugu horreeyey ee boostada ee laga soo doortay deegaannada xubnaha ka ah. Siddeed kale oo kale ayuu magacaabay Madaxweynuhu halka saddex kalena ay yihiin xubno hore oo madaxwayne ah: madaxweyne ku xigeenka, afhayeenka, iyo hal guddoomiye ku xigeen oo laga soo doortay meel ka baxsan Golaha Qaranka. Guddoomiye ku -xigeenka labaad ayaa laga soo doortay xubnaha golaha ee la doortay.
Da'da codbixinta ee Zambia waa 18, halka musharixiinta Golaha Qaranka ay tahay inay ahaadaan ugu yaraan 21.
28kii Luulyo Xoghayaha Guud ee UPND Batuke Imenda ayaa soo saaray bayaan ah in xisbigu ka xun yahay hay'adaha dawladda ee uu Madaxweyne Lungu u adeegsaday inay ka hor istaagaan musharraxa madaxweynenimo ee UPND Hakainde Hichilema inuu ololeeyo.
30kii Luulyo Hichilema iyo kooxdii ololihiisa ayaa laga hor istaagay inay galaan Chipata waxaana lagu xiray waddada ay diyaaraduhu ka duulaan ee Chipata Airport. Kahor inta uusan Hichilema imaan Chipata, booliisku waxay jeex jeexeen taageerayaashiisa. 3dii Ogosto bilayska Mbala ayaa Hichilema iyo kooxda ololihiisa ka hor istaagay in ay magaalada soo galaan, iyada oo boolisku ay sheegeen in uu u baahan yahay oggolaansho uu ku soo galo.
Ziva waa urur aan dawli ahayn, oo u ololeeya & kor u qaadaya xuquuqda codbixiyeyaasha codsiyada Zambia si ay u furaan internetka iyagoo leh: “Hannaanka doorashada waxaa iska leh Cod-bixiyayaasha/cod-bixiyayaasha. #Waxa ka horjoogtaa Internetka Waa maxay sababta loo xirayo internetka? Daahfurnaan la’aantu waxay wax u dhimaysaa natiijadan doorashada.
Tirada ka qayb -galayaasha cod -bixiyeyaasha oo badiyaa calaamad fiican uma aha kuwa hadda xilka haya, codbixiyaasha cod -bixintuna aad ayay u badnayd sida ay sheegayaan wararka gudaha.
Aad ayaan ugu faanayaa dadka reer Zambiya maxaa yeelay waan is tusnay
Khadka codbixiyeyaasha ee Zambia shalay
Niyadda ku jirta Zambia ayaa si aan gabbasho lahayn uga xoog badan isku day kasta oo lagu khiyaamaynaayo doorashada. Baabuurkaan ayaa la helay isagoo wata warqadaha doorashada oo la sheegay in lagu shubtay. Cod -bixiyayaashu waxay ka tageen safafkooda si ay arrinta wax uga qabtaan si aan sharraxaad ugu baahnayn.
Dareenka Zambia ayaa si aan gabbasho lahayn uga soo horjeeda isku day kasta oo la doonayo in lagu shubto doorashada.
Baabuurkaan ayaa la helay isagoo wata warqadaha doorashada oo la sheegay in lagu shubtay.
Codbixiyeyaashu waxay ka tageen safafkii si ay arrinta wax uga qabtaan si aan u baahnayn wax sharraxaad ah!
Dadka reer Zambia waxay u soo baxeen isbedel pic.twitter.com/g6ZiZwH7ei
Farriin ka timid Zambia ayaa leh:
Subax wanaagsan Zambia! Xogta soo gashaa waa mid aad u wanaagsan oo rabitaanka dadku waa cad yahay. Laakiin digtoonow - marka talis xilka ka tagaa argagaxo, waxay ku dhaqaaqi kartaa tillaabooyin quus ah. Markaa is -deji oo xoogga saar. Codkeenna waxaan ku ilaalin doonnaa nabad iyo jacayl qalbigeenna ku jira. Isbeddelku waa HALKAN.
Farriin deg -deg ah oo ka timid Zambia ayaa leh Waxaan ugu baaqeynaa ZICTA in ay si deg -deg ah u xannibto internetka si ay muwaadiniintu ula socdaan hannaanka doorashada oo ay u sii wataan noloshooda iyaga oo aan is -hortaagin. Waa wax laga xishoodo in xitaa PF -ta amartay xiritaanka ay soo saarto bayaanno aan xad lahayn iyada oo loo marayo VPN.
Zambia ayaa hore u baroor diiqday heesaheeda Madaxweynihii aasaasay Kenneth Kaunda: Nabadda, Dalxiiska, Isbeddelka Cimilada ayaa ahaa heestiisa.
Wax badan oo ku saabsan doorashada Zambia riix halkan.